Soomaaliya, 24 March 2019
Muqdisho: Xildh. Saqar oo la Aasay
Magaalada Muqdishu waxaa maanta lagu aasay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Dawladda Federaalka, Saqar Ibraahim Cabdalla oo ka mid ahaa ilaa 15 qof oo ku dhintay weerarkii shalay Al-Shabaab ay ku qaadday dhismaha wasaaradaha Shaqada iyoArrimaha Bulshada iyo Hawlaha Guud.
Md. Biixi oo ka Hadlay Wadahadallada Somalia
Madaxeynaha Somaliland ayaa manata khudbaddiisii sannadlaha ka hor jeeediyey labada aqal ee baarlamaanka Somaliland, iyadoo ay joogeen mas’uuliyiinta xisbiyada. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay Sagal Mustafe Xasan-Nuur
Weeraro kala Duwan oo Muqdisho ka Dhacay
Ugu yaraan 10 qof oo shan ka mid ah ay yihiin maleeshiyaddii al-shabab ee weerarka geysatay ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerar maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu qaaday xarumo wasaaradeed.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa qoddobo dhowr ah oo ku saabsan Somalia, sida dhalinyaro Alshabab ka tirsan oo xukun dil ah lagu xukumay, booqashada Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Eritrea uu ku tagay Somaliland, iyo muranka dhinaca mushaharka ciidanka Somalia.
Bar. Faaqidaadda: Xaaladda Ciidamada Dowladda Soomaaliya
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo aan maanta diiradda ku saareyno xaaladda ciidamada dowladda Soomaaliya oo bilihii ugu dambeeyay ay qaarkood ka cabanayay mushaar la'aan.
Duco iyo Duug loo Sameeyey Dadkii New Zealand
Munaasabad duco iyo aas ayaa loo sameeyey dadkii lagu laayey labo masjid oo ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand.
Heritage oo qiimeyn ku sameysay dowladda Farmaajo
Machadka Daraasaadka ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayo wixii u qabsoomay iyo wixii ka qaldamay dowladda Federalka ee Soomaaliya.
Halkuu marayaa baaritaanka dilkii Caa'isha Ilyaas
Indha-Qarshe oo ka hadlay ciidamada gadooday
Taliyaha Ciidamada Xogga dalka Jeneraal Daahir Aadan Cilmi “Indho Qarsho” ayaa sheegay in dawladdu waddo tirokoobta ciidanka, waxana uu sheegay inay muhiim tahay in ciidanku joogaan saldhiggooda.
Xubno Shabaab ah oo xukun dil lagu riday
Maxkamada Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah ku riday laba nin oo ku eedeysnaa weeraro iyo qaraxyo ay dad ku dhinteen oo Muqdisho ka dhacay.
Sh/Dhexe: Ciidamo ka gadooday mushahar la'aan
Qaar ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta ka baxay saldhigyadooda.